မြန်မာကျောင်းဆရာများ: ကိုးကားစရာ - ပညာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရှင်တို့၏ အတွေးအမြင် အဆိုအမိန့်များ
ကိုးကားစရာ - ပညာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရှင်တို့၏ အတွေးအမြင် အဆိုအမိန့်များ
ပန်းပုပညာက ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို ထွင်းထုပုံဖော်သကဲ့သို့ ပညာရေးကလည်း လူ့နှလုံးဝိညာဉ်ကို ပုံဖော်ဖန်တီးသည်။ [ပန်းပုဆရာသည် ကျောက်တုံး၏ အပြင်အခွံအကာကိုခွာကာ သူ့စက္ခုအာရုံတွင် မြင်ယောင်တည်ရှိနေသည့် ပန်းပုရုပ်ကို ဖော်ထုတ်ယူသကဲ့သို့ ] သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ပညာရေး သည်လည်း သာမန်လူအညတြ၏ ကိုယ်ထဲတွင် ပုန်းခိုကိန်းအောင်းနေသည့် တွေးခေါ်ရှင်၊ သူတော်စင်၊ လူစွမ်းကောင်း၊ ပညာရှိ၊ လူကောင်းလူမွန်၊ ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော် စသည်များကို မြှပ်နေရာမှ ဖော်ယူကာ အလင်းရောင်အောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပေသည်။
ဂျိုးဇက် အက်ဒီဆင် ၁၆၇၂-၁၇၁၉
What sculpture is to beablock of marble, education is to the human soul. The philosopher, the saint, the hero, the wise, and the good, or the great, very often lie hid and concealed inaplebeian, whichaproper education might have disinterred and brought to light.
Joseph Addison 1672-1719 English Essayist, poet, politician
: Quotes ကိုးကားစရာ
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 12:48 AM
မြို့ပြင် တက္ကသိုလ်ပညာရေးကြောင့် ကျောင်းသားများ အခက...
၁၀ တန်းအောင် ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များကို သတင်းပေးသင်တန...
ကိုးကားစရာ - ပညာရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပညာရှင်တို့၏...
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှု ပိတ်ပင်ခံ...
ကေဵာင်းသွားရင်း အဖမ်းခံရသော ကလေးစစ်သားကို မိဘမဵား ...
ဆရာဟူဘိ၊ တပည့်မရှား၊ တပြားမရှိ၊ ပီတိကိုစား အားရှိ၏...
On Education by Krichnamurti